Isakhiwo sokuqala sensimbi esingenasici sakhiwa ngeeyure ezingama-28 ukwakha imigangatho eli-11, sinobomi benkonzo ukuya kuthi ga kwewaka leminyaka - China Foshan Hermes Steel
Umbala weThayile engenazingci
Isakhiwo sokuqala sensimbi esingenasici emhlabeni sakhiwa ngeeyure ezingama-28 ukwakha imigangatho eli-11, sinobomi benkonzo ukuya kuthi ga kwiwaka leminyaka
Iprojekthi yokuhlala enendawo epheleleyo ye-3,000 yeemitha zesikwere kumgangatho we-11th kwiiyure ezingama-28 yaziswa ngokusemthethweni e-Changsha ngomhla we-16. "Ngumsebenzi" weBroad Buildable Technology Co, Ltd., inkampani yaseHunan Broad Technology Group, ebizwa ngokuba yi "Living Building", kwaye sisakhiwo sokuqala sensimbi esingenasici.
Inkqubo yokwakha kwesi sakhiwo sokuhlala kufana nokwakha imoto, ukusebenzisa iindlela zeshishini ukuguqula imodeli yokwakha yemveli. Umsebenzi kwindawo yesehlo uxelele oonondaba ukuba ubomi benkonzo yale ndlu bunokufikelela kwiwaka leminyaka.
Ngokumalunga nesizathu sokuphuhliswa "kwezakhiwo eziphilayo", uZhang Yue, usihlalo kunye nomongameli weQela eliBanzi, wathi izakhiwo zentsimbi zinokuthatha indawo yezakhiwo zemveli ukumelana neenyikima. Inkuthazo yesibini kukugcina amandla kunye nokufudumeza izakhiwo kakuhle.
Esi "sakhiwo siphilayo" sisebenzisa "ipleyiti yentsimbi engatyiwa" yaseYuanda. Isakhiwo sonke asisebenzisi ikhonkrithi kwaye senziwe ngefektri ye-100%. Ukufakwa kwendawo kulula kakhulu. Ihanjiswa kwisitya seenyawo ezingama-40 kwaye inokuhanjiswa iye kuyo yonke indawo yomhlaba ngaphandle kwezithintelo kunye nexabiso eliphantsi. Ngexesha lobhubhane lowe-2020, inguqulelo yoMzantsi Korea yase "Huoshenshan Hospital" isebenzise i-Yuanda mveliso-isitayile esinezixhobo zesiseko sentsimbi.
"Iveliswa ngeendlela zefektri kwaye inokhuseleko oluphezulu kakhulu. Ineempawu zentsimbi engenasici, ukufudumeza ubushushu obuphezulu, itekhnoloji enzulu, kunye neendleko eziphantsi." UZhang Yue uthe ngokwakhiwa kwentsimbi engenasici, inokutshintsha ukudilizwa kwezindlu kumashumi ambalwa eminyaka adlulileyo. Umcimbi wobutyebi babantu unokudluliselwa kumawakawaka eminyaka. Wazisa ukuba izakhiwo eziphilayo ziguquguqukayo ngokweentlobo zokwakha, iintlobo zeeyunithi, iintlobo zamagumbi, kunye nokudibanisa kunye nokukhupha imigangatho. Zingasetyenziselwa ukwakha izindlu zodidi oluphezulu, iihotele ezinenkwenkwezi ezintlanu, izakhiwo zezakhiwo, kunye nezindlu ezinamaxabiso aphantsi kuluntu ngokubanzi.
Iipesenti ezingama-50 zokukhutshwa kwekhabhoni zivela kwizakhiwo. Ukuba sinciphisa ukusetyenziswa kwamandla nge-80 ukuya kwi-90% kwizakhiwo, iyakulingana ne-40% yokukhutshwa kwekhabhoni yehlabathi kwixa elizayo. "Eli lithuba elikhulu lokunciphisa ikhabhoni." UZhang Yue utyhile ukuba "isakhiwo esiphilayo" samkela ubushushu obuninzi, iifestile zeglasi ezininzi, kunye nokubuyisa ubushushu bomoya obutsha, obunokunciphisa ikhabhoni nge-80% ukuya kwi-90% xa kuthelekiswa nezakhiwo eziqhelekileyo. Inokuchazwa njengelizwe le- "carbon neutral".
Kwangolo suku lunye, iNkomfa yokuCinga ngeTekhnoloji yeHuolou nayo yabanjwa. Owayengu-Nobhala-Jikelele we-UN u-Ban Ki-moon wathi kwintetho ephambili kwividiyo kwinkomfa ukuba ayikho enye indlela yokusombulula ingxaki yotshintsho lwemozulu ngaphandle kokukhutshwa kwekhabhoni. Izikhupheli ezinkulu zekhabhoni ezinjengeMelika, China, Japan, South Korea, kunye namanye amazwe aseYurophu babhengeze ukuba i-2050 okanye i-2060 iya kuba ngunyaka ekujoliswe kuwo wokukhutshwa kwe-zero zero. Injongo yoLwakhiwo lweMillennium ebekwe siSakhiwo esiBanzi soPhuhliso inxulumene kakhulu nenjongo ye-11 yeZinjongo zoPhuhliso oluZinzileyo lweZizwe eziManyeneyo, ezizezi "izixeko ezizinzileyo noluntu".
Iingcali zobunjineli bezakhiwo zathi ngaphandle komgangatho ophezulu wezakhiwo eziphilayo, ixabiso liphantsi kunelo lezakhiwo zemveli. Itekhnoloji yeenkampani zaseTshayina "eziphilayo" zinamandla amakhulu okuhlala kwintengiso yehlabathi.
Oku kungasentla ngumxholo "wolwakhiwo lwesakhiwo sentsimbi sokuqala esingenasici esibonisa isantya se-China, i-11 imigangatho eyakhiwe ngeeyure ezingama-28" eziswe kuwe lijelo leendaba zokwakha. Ijelo leendaba zokwakha liza kuqhubeka nokuthathela ingqalelo iindaba ezishushu ngakumbi. Wamkelekile ukusilandela kwaye sinikele ingqalelo kulwakhiwo. Umzi-mveliso iindaba ezishushu ~